အာထန် - ဝီကီပီးဒီးယား
Spider man ဆိုလို့ ရုပ်ရှင်အကြောင်းပြောမှာ မဟုတ်သလို၊ ပင့်ကူလူသား ထိုင်ဝမ်ရောက်သွားတဲ့အကြောင်း ပြောမှာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သုံးနှစ်သားမှာ မကျန်းမမာဖြစ်ပြီး အောက်ပိုင်းချိနဲ့သွားခဲ့ရလို့ မြေပြင်မှာ တွားသွားခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်း ပြောမလို့ပါ။
ထိုင်ဝမ်ကျွန်း Nantou မြို့နယ်ရဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာမှာ အာထန်လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ယောက်ရှိခဲ့တယ်။ ပိုလီယို ရောဂါကြောင့် အာထန်ဟာ သုံးနှစ်အရွယ်ကတည်းက ထမရပ်နိုင်ခဲ့တော့ဘဲ တွားသွားသတ္တဝါလို မြေပြင်ကို ရင်နဲ့ကပ်ပြီး တွားသွားခဲ့ရတယ်။
အာထန် ရနှစ်အရွယ်ရောက်မှ ဖခင်က သူ့လက်မှာ ဖိနပ်ကိုင်ခိုင်းပြီး လက်နဲ့ လမ်းလျှောက်တတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တယ်။ ဖိနပ်ကို လက်မှာစီးပြီး လက်နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့ အာထန်ကို လမ်းသွားလမ်းလာတွေက ထူးဆန်းအံ့ဩတဲ့ အကြည့်နဲ့ ကြည့်တတ်ကြပေမယ့် အာထန် မသိမ်ငယ်ခဲ့ဘူး။ သူ့ကိုကြည့်တဲ့ လူတွေကို ခေါင်းညိတ်ပြုံးပြခဲ့တယ်။
၇နှစ်အရွယ်ဆိုတာ ကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်ဖြစ်ပေမယ့် မိခင်က သားကို တစ်ခြားကလေးတွေ ကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင် အနှိမ်ကျင့်မှာစိုးလို့ သူ့ကို ကျောင်းမတက်စေခဲ့ဘူး။ အာထန် ၉နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ စေတနာရှိတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးက သူ့အတွက် သုံးဘီးလက်တွန်းလှည်း တစ်စီးဝယ်ပေးခဲ့တယ်။ ကျောင်းဆင်းကျောင်းတက်မှာ လှည်းကိုတွန်းဖို့ ကျောင်းသားအချို့ကိုလည်း အကူအညီ တောင်းပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် မိုးတွေရွာတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ရွာရဲ့မညီမညာတဲ့ ရွ့ံလမ်းမှာ လှည်းဘီးတွေနစ်ဝင်ခဲ့တယ်။ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သားနဲ့ ကျောင်းသားတွေပြန်ကုန်ကြပြီ အာထန်က မိုးရေထဲမှာ တစ်ယောက်တည်း.. ပါးပြင်ပေါ်မှာ မျက်ရည်နဲ့မိုးရေတွေ အတူရောယှက် စီးဆင်းလို့နေတယ်။
ဒါပေမယ့် လောကကြီးက အာထန်ကို မျက်နှာသာပေးခဲ့ပါတယ်။ ၆နှစ်လွန်ပြီးနောက် မူလတန်းအဆင့်ကို အာထန်အဆင့်တစ်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ခက်တာက ရွာမှာ အလယ်တန်းမရှိဘူး။ ကျောင်းဆက်တက်ဖို့ ဖခင်ကို အာထန်မေးခဲ့တယ်။ ဖခင်ကလည်း တောသူတောင်သား လူရိုးလူအ တစ်ယောက်ဆိုတော့ တစ်ခြားလူတွေကို အကြံဉာဏ်တောင်းခဲ့တယ်။
လူတွေက “သူ့ကို ဖိနပ်တိုက်တဲ့ အလုပ်လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါ” “တစ်ခြား အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာတစ်ခုခုသင်ခိုင်းလိုက်ပါ” “သူက ဒုက္ခိတပဲ.. ကျောင်းဆက်နေလဲ အပိုပါပဲ။ ဘာပညာမှ သင်စရာမလိုဘူး။ ခွက်တစ်လုံးပေးပြီး ကားဂိတ်တွေမှာ တောင်းစားခိုင်းလိုက်” လို့ လူတစ်ချို့က အားမနာပါးမနာ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုကြတယ်။
အဲဒီစကားတွေကြားတော့ အာထန်အရမ်း ဝမ်းနည်းပြီး လူမမြင်အောင် ငိုခဲ့မိတယ်။ စိတ်ထဲမှာလည်း “ငါ ဒုက္ခိတမဟုတ်ဘူး။ ဒီလောကအတွက် ငါဟာ လူပိုတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး။ ငါ သူတောင်းစား မလုပ်ဘူး” လို့ ကြုံးဝါးခဲ့တယ်။
ကံကောင်းတယ်လို့ပဲ ဆိုရမလား? မူလတန်းသာရှိခဲ့တဲ့ သူတို့ရွာမှာ အလယ်တန်းကျောင်းဖွင့်ဖို့ အကြောင်းဖန်လာခဲ့တယ်။ ဝမ်းသာလွန်းလို့ အာထန်မျက်ရည်ကျမိပါတယ်။ သူ့ဆုတောင်းသံကို ဘုရားသခင်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားသခင် သူ့ကို ပစ်မထားဘူးဆိုတာ သူယုံကြည်ခဲ့တယ်။ အာထန်ပိုကြိုးစားခဲ့တယ်။ ၃နှစ်လွန်ပြီးနောက် တစ်အဆင့်နဲ့ပဲ အာထန် အလယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်။ ဘုရားသခင် သူ့ကို ကူညီခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးပြီး ဘဝကို စိန်ခေါ်ရဲတဲ့ လူကမှ မြင့်မြတ်သတဲ့...
“အခက်အခဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲလို့ ကျွန်တော်တွေးတယ်။ အခက်အခဲက ကိုယ့်ကို အလဲထိုးသွားမျိုး ကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး”
အဲဒီကမှတစ်ဆင့် အာထန်ရဲ့ပညာရေးတွေ အဆင့်ဆင့်တက်ခဲ့တယ်။ ထိုင်ဝမ် Feng Chia University (逢甲大學) ကနေ Mechanical Engineering ကို အဆင့်တစ်နဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပြန်တယ်။
ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ရှာတဲ့အချိန်မှာ အာထန်ဟာ ကုမ္ပဏီတော်တော်များများရဲ့ ငြင်းဆန်တာကို ခံခဲ့တယ်။ တစ်ချို့ကုမ္ပဏီက သူတောင်းစားအထင်နဲ့ သူ့ကို မောင်းထုတ်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံးမှာ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက သူ့ကို “အစမ်းသုံး” ဖို့ သဘောတူခဲ့တယ်။ အာထန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။ လခကောင်းဖို့ မမျှော်ကိုးခဲ့ဘူး။ အချိန်ပို လုပ်အားခ မယူခဲ့ဘူး။ သာမန်လူကောင်းတွေထက် သူအဆပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ သူ့ရဲ့ အလုပ်အပေါ် တန်ဖိုးထားမှု၊ လေးစားမှုကြောင့် သူဌေးရဲ့ ချီးမြှောက်မှုကို ခံခဲ့ရတယ်။ သာမန်ဝန်ထမ်းဘဝကနေ မန်နေဂျာဖြစ်လာတဲ့အထိ အာထန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ အရမ်းလှပြီး ထက်မြက်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ အာထန်ဆုံခဲ့တယ်။ ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကို ကိုယ်လက်အင်္ဂါ မသန်စွမ်းသူနဲ့ ပေးစားချင်ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်နဲ့ လမ်းလျှောက်သူရဲ့ ဘဝထဲ ကိုယ့်သမီးနဲ့ ဘယ်လက်တွဲခိုင်းရဲပါ့မလဲ?
“ကျွန်တော့်မှာ ခြေထောက် မသန်စွမ်းတာကလွဲရင် ကျန်းမာတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ မှန်ကန်တဲ့ အကျင့်စရိုက်တွေ ရှိသေးတယ်။ ဝင်ငွေလခကလည်း တည်ငြိမ်တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးက ဦးသမီးကို ကျွန်တော်သိပ်ချစ်လို့ပါပဲ”
အခုဆိုရင် အာထန်မှာ လှပတဲ့ သမီးလေး သုံးယောက်ရှိပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ (速跑得機械公司董事長) ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၅နှစ်တုန်းက အာထန်ဟာ ကားအရောင်းအဝယ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုထဲကို “တွား” ပြီးဝင်ခဲ့တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေက သူ့ကို အလှူလာခံသူ၊ ငွေလာတောင်းသူထင်ပြီး မောင်းထုတ်ခဲ့ကြတယ်။ “ကျွန်တော် ကားဝယ်မလို့” လို့ အာထန်ပြောတဲ့စကားကို ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ခဲ့ကြဘူး။
နောက်တစ်နေ့ အဲဒီကားကုမ္ပဏီကိုပဲ အာထန် နောက်တစ်ကြိမ် “တွား” ဝင်ပြန်တယ်။ ဘဏ်ကထုတ်လာတဲ့ ငွေတွေကို စားပွဲပေါ်တင်ပြီး ကားဝယ်မယ်ပြောမှ ဝန်ထမ်းတွေက ပျာပျာသလဲ ရေနွေးကမ်းသူက ကမ်း၊ ကော်ဖီပို့သူက ပို့နဲ့ ပျာများခဲ့ကြတယ်။ ငွေရှင်းပြီးတော့ အာထန်က အသင့်ပါလာတဲ့ သေတ္တာထဲကနေ ကိရိယာတစ်ချို့ထုတ်ပြီး ဘရိတ်နဲ့ လီဗာနေရာမှာ တပ်ဆင်ပြီး လက်နဲ့မောင်းနိုင်အောင် လုပ်ခဲ့တယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်၂ဝက ကျောင်းဆောင် ရထပ်၊ ၈ထပ်တိုက်မှာ လောင်တဲ့မီးကြောင့် ကျောင်းသား တော်တော်များများ အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကို သတင်းမှာမြင်တော့ အာထန် တော်တော် စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီနောက် တစ်နေ့မှာ ပင့်ကူတစ်ကောင် အမျှင်ကိုအသုံးပြုပြီး စပျစ်ပင်ကနေ လျှောဆင်းလာတာကိုတွေ့တော့ အမြင့်ပေါ်ကနေ လျှောဆင်းနိုင်တဲ့ စက်ကို သူထီထွင်ခဲ့တယ်။ တိုက်အမြင့်ရဲ့ ပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှာ အဲဒီစက်ကို တပ်ပြီး စမ်းသပ်ကြည့်တော့ မြေပြင်ကို အန္တရာယ်ကင်းကင်း လျှောဆင်းလာနိုင်တာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ ခွင့်ပြုမိန့်ယူ ထုတ်လုပ်ပြီး နိုင်ငံခြားအထိ ပြိုင်ပွဲဝင်ခဲ့တာ ထီထွင်ဆု ရွှေတံဆိပ်ကို သူရခဲ့တယ်။
တစ်နေ့မှာ ပါတီအကြီးအကဲတစ်ဦး ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ အစည်းအဝေးသွားတက်တော့ ဓာတ်လှေကားထဲမှာ နှစ်နာရီကြာ အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ အာထန်သိတော့ ဓာတ်လှေကားပျက်ရင် ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်လှေကားထဲ ပိတ်မိနေရင် အောက်ထပ်ကို အလွယ်တကူဆင်းနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကင်း ဓာတ်လှေကားကို ထီထွင်ခဲ့ပြန်တယ်။ ဒီထီထွင်မှုကပဲ အာထန်ကို “ရွှေဦးနှောက်” ဆုကို ရစေခဲ့ပြန်တယ်။
သူ့ထီထွင်ခဲ့သမျှ အသုံးအဆောင်တွေထဲမှာ အာထန် အားအရဆုံးက ပစ္စည်းအဟောင်း၊ အပျက်တွေကို ပြန်လည်ပြုပြင် အသုံးပြုတာပဲဖြစ်တယ်။ သူ့ကိုယ်တိုင်ကိုကလည်း မသန်မစွမ်း စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလို ဖြစ်ခဲ့ဖူးလို့ ဘယ်အရာကိုမဆို မပစ်ဘဲ သူ့ရဲ့ရွှေဦးနှောက်နဲ့ လက်နှစ်ဖက်ကို အသုံးပြုပြီး အဟောင်းကအသစ်ရအောင် ထီထွင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။
သူရခဲ့တဲ့ ဆုတွေကတော့ “ထီထွင်ဆု ပထမ၊ ရွှေဦးနှောက်ဆု၊ International Geneva, Switzerlandက ထီထွင်ဆု ရွှေတံဆိပ်၊ ဂျာမဏီမှ ထီထွင်ဆု ရွှေတံဆိပ်၊......၊......၊ ... ရရှိခဲ့တဲ့ ဆုတွေက ရေးလို့မကုန်နိုင်သလို အာထန်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ တစ်ဦးတည်းသော မသန်မစွမ်း ထီထွင်သူလည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။
တစ်ကြိမ်တစ်ခါက လူတွေကဲ့ရဲ့လှောင်ပြောင်ခံရသူ၊ လူတွေနှိမ်ခဲ့သူတစ်ဦးဟာ သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်တော့မှ လွှတ်မချခဲ့ဘူး။ မသန်မစွမ်းသူ သူ့အတွက် ရှေ့ဆက်လှမ်းဖို့ ခြေလှမ်းမရှိဘူးဆိုတာ သူသိခဲ့တယ်။ လူကောင်းတွေထက် ဆတိုးမကြိုးစားရင် သူ့အတွက် မနက်ဖြန်ဆိုတာ ရှိလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲ သိခဲ့လို့ “ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခဲပါစေ... အရှုံးမပေးဘူး” ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ သူကြိုးစားခဲ့တယ်။
“ကံကြမ္မာဆိုတာ မွေးရာပါ မဟုတ်ဘူး။ ကံကြမ္မာဆိုတာ မျိုးရိုးမလိုက်ဘူး၊ ကံကြမ္မာကို လှည့်ပြောင်းလို့ရတယ်၊ ကံကြမ္မာကို ထီထွင်လို့ရတယ်။ ကံကြမ္မာကို စိန်ခေါ်လို့ရတယ်၊ ဇွဲလုံ့လရဲ့နောက်မှာ အောင်မြင်မှုဆိုတာ ရှိတယ်” ဆိုတာကို သူယုံကြည်ခဲ့တယ်။
မှီငြမ်း ... http://www.bcc.com.tw/about/sunlove7.asp
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အာထန်&oldid=342785" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆၊ ၁၁:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။